Vaovao - momba ny vala ningbo, mety mila mahafantatra zavatra ianao
Hey, azoko tsara aloha ny momba anao sy ny antony, satria ianao foana no mpanjifa farany ny taratasy teo aloha .ary misy teboka sasany eto ambany eto te-hanazava mazava aminao aho, na inona na inona raharaha ataonao aminay na tsia .
1: "NINGBO FOLD" C1S ivory board dia taratasy andiany iray avy amin'ny APP, fa tsy taratasy novokarina tao amin'ny tanàna ningbo, midika izany fa tsy misy orinasa afaka manao an'io taratasy io ihany, ankoatry ny APP. Ka raha misy miteny aminao fa afaka manao ny mitovy ho anao, tsy misy, angamba mitovy ihany ny fijeriny, fa ny kalitao kosa samy hafa tanteraka.
Ary be mpampiasa amin'ny fanaovana boaty fitsaboana na an-trano sy any ampitan-dranomasina, satria manana endri-javatra maro etsy ambany:
①Fotsy fotsy, fahamaimainty miloko, fahasalamana tsara, endrika malama sy marefo, vokatra fanontana tena tsara;
②Barcode dia azo alefa amin'ny laser amin'ny taratasy manokana (mihatra amin'ny kaody fanaraha-maso elektronika ny fanafody);
StrengthHatanjaka taratasy avo, henjana tena tsara, fampisehoana boaty tsara, mety amin'ny karazana filàna aorian'ny fanodinana;
④Miverina any aoriana ny fanaovana pirinty loko roa, manatsara ny sary fonosana;
⑤Ny ilany aoriana dia manana fiasan'ny bakteria tokana, amin'ny alàlan'ny fikarohana SGS, dia afaka manakana amin'ny fomba mahomby ny fiompiana Escherichia coli sy Staphylococcus aureus;
2: APP, orinasa lehibe tokoa izy io hamokarana karazan-taratasy rehetra, ary manana taratasy avo lenta eto an-tany izy. Ary ho an'ireo ozinina taratasy rehetra dia tsy manao orinasa mivantana amin'ny mpanjifa farany mihitsy izy ireo. manana masoivoho marobe erak'izao tontolo izao izy ireo, ary ny masoivoho rehetra dia tsy maintsy mividy habetsahana amin'izy ireo isam-bolana na manao ahoana na manao ahoana ny fivarotany amin'ny tsenany manokana.
Ary izahay dia iray amin'ireo masoivoho, ny tsy fitoviana lehibe indrindra dia ny manao orinasa miaraka amin'ny APP na eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina, tena lehibe ny fitakianay ka manome anay ny vidiny tsara indrindra.
3: azoko ny vaovao anio, hiakatra hatrany ny vidiny amin'ny fotoana manaraka, tafakatra 100 usd isaky ny zoma lasa teo (10 martsafaha, 2021). Ka raha tena mila azy ianao dia hamafiso fotsiny izany fa ASAP dia hamonjy vola be izy.
Ary mety hihena izany amin'ny ho avy, raha misafidy ny hiara-hiasa aminay ianao, aza manahy, raha omen'ny APP vidiny mihena izahay indray andro any, dia hanome anao vidiny mihena koa izahay. Mahazo fotsiny izay tokony ho azontsika.
4: heveriko fa ny masoivoho sasany eo amin'ny tsenanao dia manana stock, ary afaka mivarotra anao amin'ny vidiny lafo be izy ireo, saingy fantatrao ve fa raha mihoatra ny 3 volana no namoronana ilay taratasy dia miova be ny kalitao, toy ny loko, ny hamandoana ary noho izany tsia .Koa tsy manome sosokevitra ny mpanjifanay mihitsy izahay hitahiry izany amin'ny be dia be indray mandeha, ny fividianana isam-bolana no tsara indrindra.
5: Aza manao risika amin'ny kalitao mihitsy.
Ny azonay atao dia ny mamela anao hampiasa vola kely kokoa hahazoana ny taratasy avo lenta.
Mampidi-bola toy ny tokony ho izy fotsiny isika.
Ho an'ny orinasantsika maharitra